(XOG) Fahad Yaasiin & Farmaajo oo balan uga baxay MW Ali Guudlaawe | SMC
Home WARARKA MAANTA (XOG) Fahad Yaasiin & Farmaajo oo balan uga baxay MW Ali Guudlaawe
(XOG) Fahad Yaasiin & Farmaajo oo balan uga baxay MW Ali Guudlaawe
Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa SMC usheegay in DFS ay wadato Musharax aan aheyn Ali Guudlaawe , kaaso aan wali lashaacsaneen.
Agaasime Fahad Yaasiin & MW Farmaajo waxeey horay balan ula galeen Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Ali Guudlaawe ineey ku taageeri doonaan doorashada uu dhawaan gali doono taas badalkeedna ay asagana ka rabaan in uu kala shaqeeyo dib usoo doorashada MW Farmaajo.
Fahad Yaasiin oo ah qof isrog rog badan oo hal meel kaliya aanan siyaasada ka abaarin ayaa hada la ogaaday in uu wado Musharax qarsoon oo reer Hiiraan ah kaaso uu ku doonaayo inuu ku dhabar jabiyo MW ALi Guudlaawe .
Siyaasada Fahad Yaasiin ayaa ah Hadii uu Guul dareesto Musharaxiisa qarsoon in uu MW Ali Guudlaawe kumana sheegto si loogu fushado dano siyaasadeed oo ah dib u doorashada MW Farmaajo.
Wafdi balaaran uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha gudaha ayaa lafilayaa inuu gaaro Baladweyn si ugaaska beesha Xawaadle ugu qanciyo DFS waxeey wadaa musharax Xawaadle ah taageero dhaqaalana ayku bixineyso sidaasi darteed inuu ogolaado in si siman loogu tartamo kursiga Madaxtinimada Hirshabeelle.
Beesha Xawaadle ayaa iyada u aragta in hadii latartamo in ay goobta guusha kasoo qadi karin maadama ay ogtahay sida ay ukala fogyihiin Qabaailada kale ee ladagan G/Hiiraan .
Beesha Xawaadle ayaa inta badan maroorsatay talada Gobolka Hiiraan iskana dhaadhicisay in qabaailada ladagan ay yihiin kuwa ayaga ku hoos nool taaso kaliftay kala fogaanshaha Xawaadle & 11 Qabaail ee daga Hiiraan.
Lama oga qorsha qarsoon ee Fahad Yaasiin inuu ka warqabo MW Ali Guudlaawe , Maadama Beesha Abgaal siyaasiintooda badana aysan laheyn dhaqan balan ka bax ah ama qiyaamo qayaxan sida looga bartay MW Farmaajo & Fahad Yaasiin.
Previous articleDhageyso Shacabka Magalada Baydhabo Oo Siyaaba kala duwan uga hadleen Sara U kaca ku yimid Qiimaha Caanaha Geela
Next articleXOG: Fahad Yaasiin oo safar qarsoodi ah ku tegaya Jowhar, (Ujeedka & Macluud laga helay)